मध्ययुगिन शैलीको झल्को दिने कुप्रथाले अझै पनि मुगुलाई छोडेन, कथित माथिल्ला जातले तल्ला जात भनाउँदालाई शोषण गर्ने खलोप्रथा अmझै पनि विद्यमान दान बहादुर बुढा, मुगु । २१ औं शताब्दीमा पनि नेपालका कतिपय स्थानमा १९ औं शताब्दीको झल्को दिने शैलीका कुप्रथाहरु
काठमाडाैँ । देशमा संघीय संरचना कार्यन्वयन भैसकेपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । झण्डै दुई तिहाईको बहुमत नजिकको रहेको सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा शायद नअटाएका कुनै क्षेत्र छैन । संसदमा
काठमाडौँ : सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त गर्ने अठोटलाई केन्द्रमा राखी आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा दर्जन बढी नयाँ नीति र कार्यक्रम समावेश गरेको छ । ‘समृद्धि अब नेपालका लागि मृगतृष्णा हुन सक्दैन, एक जना मात्रै नेपाली भोकै
काठमाडौँ : सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई क्रमशः निर्यातमूलक उद्योगको रुपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुएको सरकारको आव २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यात
काठमाडौँ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायिकीकरण र यान्त्रीकीकरणको विकास गरी आगामी पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादकत्व दोब्बर वृद्धि गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले आज अपराह्न संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषिको उत्पातकत्व
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमण
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य सुवास नेवाङले
काठमाडौँ : सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्त
दुई ठुला पार्टीबिच एकता हुनु राष्ट्रकै लागि सकारात्मक: राजनीतिक विश्लेषक पौडेल
‘ओली लम्पसार होइनन्, मोदी सच्चिएर आएका हुन्, सांसदलाई सिध्याउन खोजियो’
भारतको नाकाबन्दी डिजाइनमै भएको थियो : भारतका लागि पुर्व राजदूत दिपकुमार उपाध्याय
काठमाडौँ : नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधनको विषय टुंगोमा पुगिसकेको बताउँदै मधेशवादी दल सरकारका सहभागी हुन प्राविधिक कुरा मिल्न मात्र बाँकी रहेको जानकारी दिनुभएको छ । नीति तथा
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनताको आर्थिक समृद्धि र विकासमुखी रहेको बताउनुभएको छ । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधिसभा भवनबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले
काठमाडाैँ । देशमा संघीय संरचना कार्यन्वयन भैसकेपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । झण्डै दुई तिहाईको बहुमत नजिकको रहेको सरकारले पेश गरेको
काठमाडौं । सरकारले दश वर्षमा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बानउने अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले आज जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको सरकारका तर्फबाट
. रिया भण्डारी काठमाडौं । सरकारले नीति कार्यक्रममा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । नेपालमै औषधि उत्पादनलाइ
तत्काल रेल निर्माण कार्य सुरु गर्ने सरकारको तयारी, बन्द तथा रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउँदै चिनीमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको उदेश्य काठमाडौं । सरकारले बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने भएको छ
निजी आवास पुनःनिर्माण एक वर्षमा सकिने
काठमाडौँ । सरकारले निजी आवास पुनःनिर्माण एक वर्ष तथा ऐतिहासिक सम्पदा काष्ठमण्डप, रानीपोखरी र धरहराको पुनःनिर्माण तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज संघीय
पोखरा । पर्यटकीय क्षेत्र खहरेबाट प्रहरीले ठूलो परिमाणमा लागूऔषधसहित १० जनालाई पक्राउ गरेको छ । आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा
सन्तोष काफ्ले, सुनसरी । धरानको छुट्टा छुट्टै स्थानबाट भारी मात्रामा लागू औषधसहित चार जनालाई धरान प्रहरीले प्रक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको
. तारा आचार्य काठमाडौं । सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा मोरङ जिल्ला अदालतमा प्रतिवादीहरुको तर्फबाट भईरहेको थुनछेक बहस
वैवाहिक समारोहमा ह्यारीको आँशु ,तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल
‘कुम्भ करण’ ट्रेलरः एउटा शिक्षिकाको पछि तीन पात्र (भिडियोसहित)
छोटो स्कर्ट लगाएको टिप्पणीबारे आक्रोसित हुँदै करिश्माले लेखिन् यस्तो स्टाटस
काठमाडौँ। सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको
काठमाडौँ । सरकारले आगामी दश वर्षभित्र मुलुकलाई मध्यमस्तरको आय भएको देशका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य
रमेश लम्साल काठमाडौँ, (रासस) । भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनामा सफल प्रयोग गरिएको टनेल बोरिङ मेशिन
नवलपरासी । पूर्वी नवलपरासीमा स्थापना भएको नेपालको सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग होङ्सी शिवम सिमेन्टले
हुवावे नोभा टू-आई अब सस्तैमा पाइने
भारतबाट ल्याइएको विद्युत हटाउने तयारी भइरहेको उर्जामन्त्री पुनको भनाई
काठमाडौँ । पुदिना स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक हुन्छ । यो हाम्रो वरिपरि पाइने वनसपति हो ।
काठमाडौँ । ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुन र नेपाल भ्रमणमा रहेका चीनको सिचुवान प्रान्तका
बिहीबार साँझ २ सय ६० असईको बढुवा, हेर्नुस् काे काे परे ?
भेनेजुयलाको राष्ट्रपतिमा मामडुरो निर्वाचित
कराकस । भेनेजुयलाका राष्ट्रपति आगामी छ वर्षका लागि अनुमोदित हुनुभएको छ । भेनेजुयलाको निर्वाचन अधिकारीले
श्रीलङ्कामा भारी वर्षा र हुरीका कारण पाँचको मृत्यु सात वेपत्ता
खेतमा काम गरिरहेका १२ जना किसानहरु चट्याङ लागेर मृत्यु
रेलमा भिषण आगलागि
सरकारद्वारा उच्च क्षमताका दुई प्रसारण लाइन निर्माणको घोषणा
काठमाडौं । सरकारले ७६५ केभी उच्च क्षमताका दुई प्रसारण लाइन निर्माणको घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी केही वर्षभित्रै ७६५
काठमाडौँ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरू नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र भुटान अब यही आर्थिक वर्षभित्र सूचना राजमार्ग (एकीकृत अप्टिकल फाइबर सञ्जाल) मा
काठमाडौं । विश्वकप २०१८ नजिकिएसँगै सर्बत्र फुटवलको चर्चा सुरुभएको छ । सबै साथीभाई र परिवार बसेर विश्वकप फुटवललाई चाडपर्वको रुपमा
मलेसिया जाने कामदार ठगीकाे अाराेपमा ४८ जना पक्राउ
काठमाडौं । मलेसिया जाने कामदार ठगी गरेकाे अाराेपमा ४८ जना पक्राउ परेका छन् । कामदारसँग
पोर्चुगलबासी नेपालीबाट दिवंगत राईप्रति श्रद्धान्जली अर्पण
कतारमा रहेका नेपालीलाई रमजान समयावधी भरी राहत
काठमाडौँ,रासस । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ठेक्का लिएर काममा ढिलासुस्ती गर्ने तथा कमसल काम गर्ने कार्यमा
दुई तस्वीरमा तामाखानीको सुरुङ
आजको राशिफल : साल जेठ ७ गते, सोमबार